စည္​းလံုးမႈ႐ွိၾကတယ္​ — Steemit
ပလက်ဖောင်းဂိမ်းသို့ features တွေထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် ကိန်းရည်ရွယ်ချက်ကိုစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. မိုဘိုင်းဂိမ်းစျေးကွက်ဖမ်းပြီးရန်ဖြစ်ပါသည် သင် SDK ကိုနှငျ့အဘယျသို့ပွုနိုငျ အဆိုပါ SDK ကိုအဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှု Store ကအရင်းအမြစ်ကိုဖွင့်ဖို့အောက်ပါ
စည်းလုံးညီညွတ်ရေး developer များအဘို့ဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးရန်ပလက်ဖောင်းပေးဘို့အကျော်ကြားဖြစ်သောစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးဂိမ်းအင်ဂျင်, ပိုများသော 2017 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိမိုဘိုင်းဂိမ်း၏ထက်ဝက်ထက်စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးပြီးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ် ဖလားခေါင်း
3ချီးနှင့်, Kin ဂေဟစနစ်ကြီးထွားခြင်းနှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်များ၏စစ်ဆင်ရေးရန်ပုံငွေမဟာဗျူဟာကိုသုံးအောက်မှာသော့ခတ်ခြင်း, Kin ဖောင်ဒေးရှင်းမှ၏ကြည့်ရှုမှုအောက်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ Kin Engine ကိုတနှစ်လျှင်နှင့်အစဉ်ပိုင်ကျန်ရှိသော 20 ရာခိုင်နှုန်းကိုတစ်မှုနှုန်းမှာအချိန်ကျော်ပေးဝေရေး၏ 60 ရာခိုင်နှုန်းကိုဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားသည်ချီး။ ကိုနှင့်စသည်တို့ကို Pokemon, Kerbal အာကာသအစီအစဉ်: တစ်ဦးကဂိမ်းစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို အသုံးပြု. ဖန်တီး ဂိမ်း developer များဟာကစား Kindle SDKKin ဂိမ်း SDK ကို, ဆော့ဝဲဖှံ့ဖွိုးတိုးတကိရိယာအစုံသုံးပြီး Kindle
5ကြမ်းတမ်း beta ကိုအဆင့်ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်, က github အတွက်ဖြန့်ချိရန်စီစဉ် ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းသို့မဟုတ်အဆင့် Up ကိုမဟာဗျူဟာကိုမည်သို့အဖြစ်, သတင်းအချက်အလက်မျှဝေသူဆုချမယ့်စနစ်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားမည်အကြောင်း, အားနည်းချက်များကိုသတင်းပို့ကူညီဖို့သို့မဟုတ်စစ်တမ်းကောက်ယူအသုံးပြုသူများမရရှိနိုင်ဂိမ်းသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တစ်အသုံးဝင်သောအကဲဖြတ် Leave က်ဘ်ဆိုက်များ စိတ်အားထက်သန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ Kindle အဖြူရောင်စက္ကူ လဲလှယ် Bancor ကွန်ယက်: BNT အဆိုပါ Kin နှင့်အတူဖလှယ်နိုင်ပါသည် Stellarport, ကြယ်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးချိန်း: XLM နှင့် Kin ဖလှယ်နိုင်ပါတယ် EtherDelta (ForkDelta), Mercatox, IDEX: ETH အဆိုပါ Kin နှင့်အတူဖလှယ်နိုင်ပါသည် YoBit, Mercatox: BTC အဆိုပါ Kin နှင့်အတူဖလှယ်နိုင်ပါသည် Stevenage Mieon မှတ်ချက်များ @heonbros သာသင်ကုန်ပစ္စည်းများကိုသုံးပါလျှင်သင်မိုဘိုင်းဂိမ်းအကြားအခန်းကဏ္ဍဝေမျှနိုင်သောကောင်းသောစိတ်ကူးနှင့်တူ၏ကြည့်ရှု, ဂိမ်းထဲမှာတစ်ဦးကဂိမ်းခအတွက်မှတစ်ဆင့်ဂိမ်း developer ရဲ့ရှုထောငျ့ခဲ့ flowerbed တစ် LOCK-IN အကျိုးသက်ရောက်မှု counterproductive ပျောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့သညျပွုပါလျှင်စီးရီးထုတ်လုပ်ရန်အဖြစ်၏သင်တန်း, အထူးဋ မှလွဲ. ထိုသို့သောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဂိမ်းကိုတာဝန်ခံလည်းဝင်ငွေမှာ google ၏ပလက်ဖောင်း provider ကပန်းသီး, အရင်းအမြစ်ခဲ့သည်, သူတို့ကတစ်ဦးကြီးတွေကိုင်တွယ်လုပ်ပုံရသည်။ ငါအချို့အသေးစိတ်အစီအစဉ်နှင့်အတူကဖြေရှင်းပေးဖို့ဘယ်လိုအံ့သြတယ်။ Steemit တိုကင် Lab အဆိုပါအခန်းကြီးလက္ခဏာသက်သေအဆိုပါအကြွေစေ့ / အကြောင်းကိုထင်မြင်ချက်များဖလှယ်။ သတင်းအချက်အလက်နှင့်တုံ့ပြန်ချက်မှတ်ချက် (အခြားဆောင်းပါး / ဆောင်းပါးလင့်ခ်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်) မှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူ 10 မှ 100% မှမဲပေးပါလိမ့်မည်။ STEEM စာရေးသူင်ငွေ 90% ကို၎င်း, SBD 85% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်, SBD 5% ကို STL မှအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏ၏ 80% တစ်ဦးချင်းစီပံ့ပိုးမှုများကိုအဖြစ်ဖြန့်ဝေသည်နှင့် 20% ပူးတွဲဖြန့်ဝေနေကြသည်။ အဆိုပါအရံလာမည့်အကြွေစေ့ / လက္ခဏာသက်သေအဖြူရောင်စက္ကူအပါအဝင်, ဘာသာပြန်ချက်, များအတွက်အသုံးပြုသည်။ (Plan ကိုစက္ကူဘာသာပြန်ထားသောဆောင်းပါးများမှ Steemit နှင့်မျှဝေသူထား)